Uru:ikuku dị mma nke ukwuu; nwere ike ịkpụcha gas na-egbu egbu; Nwee ike ijide okpomọkụ; Nwere ike ịmịkọrọ mmiri; Nwere ike mgbochi mmiri; Mgbanwe; Ọ bụghị unkempt; Obi mara ezigbo mma ma dị nro; E jiri ya tụnyere masks ndị ọzọ, ụdị ederede adịghị mfe; Dị oke agbanwe, enwere ike belata mgbe agbatịchara; Ọnụahịa dị ala, nke kwesịrị ekwesị maka mmepụta ihe.
Akpa mkpuchi nkpuchi nchekwa ọkwa KN95
Igwe nwere imi plastik wuru, dabara ụdị ihu niile.
Ugboro abụọ okpukpu abụọ ngwugwu dịpụrụ adịpụ, kpochapụ ikuku ikuku n'akụkụ abụọ.
N'okpuru mwepụ iche, nkenke nhichapụ dị mma Angle.
Ibepu ahihia na-adighi nma
Enweghị ọgwụgwọ ntụ ntụ iji belata allergies
Ọ nwere ike zere ohere ịkpọtụrụ kọntinent nke gluu ntụ ntụ ma mee ka mbelata nke allergies
Eluigwe na ala obere akara iji bulie esemokwu
A na-eji uwe aka wee chọọ ọfụma ma ghara ịsọ asọ
1. 75% mmanya aka sanitizer sanitiser gel na-egbu ihe karịrị 99.99%, ọ bụghị imerụ aka gị
2. Nwere ike rụọ ọrụ ngwa ngwa
3. Dị nro ma ghara iwe iwe, anaghị emerụ anụ ahụ ahụ
Ejila mmiri saa mmiri, ọ dị mfe ichekwa mmiri
4. Gel udidi, ị nwere ike ijikwa ego ahụ ngwa ngwa. Obere obere, dị mfe oburu
Ndị na-ebugharị Kn95 na N95 nwere otu nchekwa nchebe, mana naanị soro usoro ule nke mba dị iche iche. Ihe mkpuchi Kn95 na-agbaso ụkpụrụ ndị China na N95 masks na-agbaso ụkpụrụ America. Ihe nchebe ha maka urughuru mmanụ (sodium chloride patị maka nnwale) erughị 95%.
Uwe nchedo nke a na-atụfu na-ezo aka na ihe nchekwa nchekwa nke ndị ọrụ na-eyi mgbe ha batara na klas nke A ma ọ bụ ndị ọrịa na-efe efe n'okpuru nlekọta nke ọrịa A na-efe efe.
Ejiri agbaze agbaze bụ isi ihe nke ihe nkpuchi ahụ. Isi ihe nke akwa gbazee bụ polypropylene.
Dị ka aha ahụ pụtara, ọ bụ warara rọba ejiri ya na ihe nkpuchi iji dozie ihe nkpuchi na akwa imi.
Yabụ, ana-akpọ akwa akwa imi ahụ zuru agba nke imi - ọgịrịga imi - akwa imi.
Ọrụ nke permeability ikuku bụ njirimara nke nkpuchi nkpuchi.
Na gburugburu ebe obibi na-ekpo ọkụ ma na iru mmiri nke ikuku ikuku na-adịghị mma ma ọ bụ nnukwu olu ọrụ, iji ihe mkpuchi anwụrụ na valvụ iku ume nwere ike inyere gị aka inwe ahụ iru ala mgbe ị na-agwụ ike.